November 7, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Home 2020 November 07
Chelsea oo garoonkeeda Stamford Bridge guul ay u qalantay kaga gaartay kooxda Sheffield United… +SAWIRRO
Cayaaraha November 7, 2020
(London) 07 Nof 2020. Chelsea ayaa garoonkeeda Stamford Bridge guul ay u qalantay kaga gaartay kooxda Sheffield United, kaddib markii ay kaga adkaatay 4-1, kulan qeyb ka ahaa horyaalka Premier League. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2-1 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Chelsea. Daqiiqadii 9-aad kooxda Sheffield United ayaa hoggaanka […]Sii akhriso
Madaxda caalamka oo u hambalyeysay Joe Biden iyo Kamala Harris
Soomaaliya November 7, 2020
Washington (SONNA)- Madaxda beesha caalamka ayaa hambalyo u diray Madaxweynaha la doortay Mareykanka ee Joe Biden. War qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska Ra’iisul Wsaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa hambalyo loogu diray Joe Biden oo ku guuleystay tartankii Madaxtinimo ee Mareykanka iyo Kamala Harris oo noqoneysa Madaxweyne ku-xgieenka dalkaas. Ra’isul Sii akhriso
Joe Biden oo loo doortay madaxweynaha 46-aad ee Maraykanka
Washington (SONNA)- Musharaxa Xisbiga Demoqoraadiga Joe Biden oo soo noqday madaxweyne ku xigeenka Maraykanka muddo xileedkii Obama ayaa ku guulaystay madaxtinimada dalkaas, ka dib maalmo ay natiijada codadka ee gobollada Maraykanka ku loolamayeen madaxweyanaha waqtigiisu dhammaaday ee Donald Trump. Joe Biden ayaa codadka Ergada gobollada Maraykanka ee loo yaqaan Electoral Sii akhriso
Barcelona oo garoonkeeda Camp Nou guul raaxo leh kaga gaartay kooxda Real Betis… +SAWIRRO
(Barcelona) 07 Nof 2020. Barcelona ayaa garoonkeeda Camp Nou guul raaxo leh kaga gaartay kooxda Real Betis, kaddib markii ay kaga adkaatay 5-2, kulan qeyb ka ahaa horyaalka La Liga ee dalka Spain. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbardhac 1-1 ah ay isku dhaafi waayeen labada kooxood Barcelona iyo Real Betis. Daqiiqadii 22-aad […]Sii akhriso
Joe Biden oo ku guuleystay Doorashadii ka dhacday Mareynkanka
Muqdisho.(SONNA):- Joe Biden ayaa ku guulaystay Doorashadii ka dhacday dalka Maraykanka, isagoo Donald Trump kaga adkaaday tirinta codadkii la dhiibtay Salaasadii. Joe Biden ayaa ku guuleystay gobolka loolanka adagi ka taagnaa ee Pennsylvania, waxaanay taasi u sahlaysaa inuu helo in ka badan 270-ka cod ee ergada gole-doorasho ee uu u baahan yahay si uu u […]Sii akhriso
Wasiirka Beeraha Soomaaliya oo daahfuray wejiga labaad ee la dagaallanka Ayaxa+Sawirro
Muqdisho.(SONNA):- Wasiirka Beeraha iyo Waraabka Soomaaliya ayaa daahfuray wejiga labaad ee buufinta iyo la dagaallanka Ayaxa oo laga fulin doono Gobolada Koonfureed ee dalka. 30 Degmo oo ka mid ah maamulada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Jubbaland ayaa loo dhoofin doona qalabkan oo ay Wasaaradda Beeraha ugu talogashay in lagu buufiyo Ayaxa oo ay qeylo dhaan […]Sii akhriso
A Somali refugee waiting for his wife and children now awaits election results. – The New York Times
Somali News November 7, 2020
A Somali refugee waiting for his wife and children now awaits election results. The New York TimesSii akhriso
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Chelsea iyo Sheffield United ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
(London) 07 Nof 2020. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Chelsea iyo Sheffield United ee horyaalka Premier League ayaa la shaaciyey. Kooxda Chelsea ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Sheffield United si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka Premier League. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Chelsea iyo Sheffield […]Sii akhriso
Wasiirka Beeraha Soomaaliya oo xafiiskiisa ku qaabilay Safiirka dalka Masar u fadhiya Soomaaliya+Sawirro
Muqdisho.(SONNA):– Kulanka dhexmaray Wasiirka iyo Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Beeraha iyo safiirka dalka Masar u fadhiya Soomaaliya ayaa looga hadlay arimo badan oo ay ka mid ahaayeyn xoojinta iskaashiga dhanka beeraha ee labada dal, hirgelinta heshiis horey u dhex maray labada dhinac, taageerida iyo dhiirigelinta beeraleyda Soomaaliyeed, iyo sidii dowladda Sii akhriso
Air strikes in Ethiopia’s Tigray region will continue, PM says – CNN
Ethiopia News November 7, 2020
Air strikes in Ethiopia’s Tigray region will continue, PM says CNN Ethiopian MPs back plan to replace Tigray government Al Jazeera English AP Explains: Why Ethiopia is suddenly on brink of civil war The Associated Press Ethiopia’s military carries out airstrikes in Tigray as Abiy moves to impose federal control over Sii akhriso